Iran: “Fanomezana Ho Antsika Ny Aterineto” · Global Voices teny Malagasy
Iran: “Fanomezana Ho Antsika Ny Aterineto”
Voadika ny 16 Oktobra 2017 1:53 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, বাংলা, 日本語, Português, 繁體中文, 简体中文, Shqip, Español, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Mey 2008 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Arsham Parsi no mpanorina sy talen'ny Fikambanan'ny Pelaka Iraniana ao Toronto, Kanada. Niresaka taminay momba ny fisian'ny pelaka Iraniana eny amin'ny sehatry ny aterineto (cybercafe), ny fanambin'izy ireo sy ny tetikasan'izy ireo izy. Voaràra ao Iran ny fahapelahana, ary voasazy an-tranomaizina na ho faty.
Ahoana ny fanombatombananao ny fisian'ny bilaogy pelaka eo amin'ny tontolon'ny bilaogy Iraniana? Maro ve ireo bilaogera miresaka momba ny fahapelahan'izy ireo?
Eny, manana bilaogera Iraniana LGBTIQ marobe izahay, ary monina ao Iran ny ankamaroan'izy ireo. Manana anaram-bosotra izy ireo ary manoratra tsy mitonona anarana, izay azo antoka kokoa ho amin'ny fiarovana azy ireo, saingy indraindray, tratran'ny governemanta amin'ny alalan'ny adiresy IP izy ireo. Saingy misy izy ireo ary tena mavitrika.
Ahoana ny fampiasanao ny aterineto, anisan'izany ny bilaogy sy ny horonantsarimihetsika, rehefa miresaka momba ny fahapelahana ao Iran?
Iray amin'ireo fitaovam-pifandraisana lehibe indrindra ananantsika ny aterineto. Raha tsy misy ny aterineto, dia tsy afaka manao zavatra betsaka ny fikambananay. Tsy manana solontena any Iran izahay satria matahotra ny fiarovana azy ireo; tsy te hampiteraka olana ho azy ireo izahay. Manara-maso ny blaogin'izy ireo izahay, ary iray amin'ireo loharanom-baovaonay izany. Fanomezana ho antsika ny aterineto.
Ahoana ny momba ny fanehoan-kevitry ny Iraniana amin'ny tranonkala/bilaoginao? Misy fifanakalozan-kevitra ve eo amin'ny olona samy pelaka na miaro ny zon'ny pelaka, sy ireo olona mihevitra ny fahapelahana ho “ota” na “fitondran-tena tsy mendrika”?
Misy fanehoan-kevitra samihafa. Maharay hafatra fankahalana maro izahay, ary hafatra maro fanohanana ihany koa. Ao amin'ny tranonkala pelaka Iraniana, manana fifanakalozan-kevitra amin'ny olon-kafa izy ireo, ary indraindray miresaka ireo olana ireo ny bilaogera. Saingy amin'ny ankapobeny, nanova ny fomba fijeriny nandritra ny taona vitsy lasa ny olona.
Misy seha-pifanakalozan-dresaka anaty aterineto ve iresahan'ireo pelaka Iraniana ny heviny na hamelany fanehoan-kevitra?
Manana gazetiboky, Cheraq izahay. Ary manana seha-pifanakalozan-dresaka ho an'ny pelaka Iraniana ihany koa. Nanomboka volana vitsivitsy lasa izany. Saingy ny blaogy no tena mahazatra.
Ahoana ny fahitanao ny toe-java-misy eo amin'ny pelaka ao Iran? Moa ve tafiditra anaty sehatra fanaovana aterineto (cyberpace) izy ireo mba haneho hevitra?
Araka ny efa nolazaiko, maro ny zavatra niova. Tsaroako taona vitsivitsy lasa izay, tsy mba nisy niresaka momba ny zonay fa ankehitriny, afaka mahita pejy an'arivony an-tserasera momba izany ianao. Araka ny filazan'izy ireo, tsy afaka ny hanana fifandraisana ara-batana malalaka izy ireo, saingy misy izy ireo ary miezaka ny ho mavitrika. Heveriko ankehitriny, fa nanjary olana momba ny zon'olombelona ny olan'ny pelaka Iraniana.
Rehefa mijery bilaogy pelaka sy lesbiana Iraniana ianao. Miatrika zava-tsarotra isan-karazany ve izy ireo?
Mazava ho azy, eny, tena hafa tanteraka izany. Manana toe-javatra samihafa izy ireo. Tsy hita maso kokoa ireo lesbiana noho ny tsy fahampian'ny zon'ny vehivavy amin'ny ankapobeny ao Iran. Tsy manana bilaogy lesbiana betsaka izahay, ary ireo fantatro, dia mazoto miezaka milaza fa misy koa ny lesbiana. Manana gazetiboky antserasera, Hamjens-e man ho an'ny lesbiana izahay. Ity no gazetiboky voalohany ho an'ireo lesbiana Iraniana.
Manana tetikasa, fanehoan-kevitra na hevitra zaraina aminay ve ianao?
Misy izahay, saingy tsy afaka miteny. Tokony hifanohana isika. Izany no hetran'ny fahalalahantsika.
16 ora izayEoropa Afovoany & Atsinanana